ယနေ့ကစပြီးစာရင်းပေးသွင်းပြီးမှလိုင်းကားစီးခွင့်ရှိမည် ! – Myanmar Live
June 11, 2020 June 11, 2020 - by peeraporn y.
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တစ်ကျော့ပြန်ထပ်ပြီး မကူးစက်ရအောင် ထိုင်းနိုင်ငံနေပြည်သူများ သွားလာလှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ “ထိုင်းချန” (ไทยชนะ) ဆိုတဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်က လိုင်းကားများမှာလည်း (QR Code) ထားရှိပေးသွားမှာဖြစ် ပြီး လိုင်းကားအသုံးပြုသူတိုင်း Check in – Check out မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထား။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ထပ်မံကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရင် ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနမှ သက်ဆိုင်သူများ ကိုအချိန်တိုအတွင်း ထိရောက်စွာခေါ်ယူစစ်ဆေးထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးပေါ်အမိန့်များဖြေလျှော့ ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း စူပါမားကတ်၊ ကုန်တိုက် နဲ့ အများသုံးနေရာတို့မှာ (QR Code) များထားရှိပေးထားပြီး ပြည်သူများကို Scan ဖတ်ပြီး Check in – Check out လုပ်စေခဲ့ပါတယ်။
ထပ်မံပြီးထိုင်းအစိုးရက အစိုးရလိုင်းကားနဲ့ ပုဂ္ဂလိကလိုင်းကားတိုင်းမှာ မိမိသွားလာခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ ကြာမြင့်ချိန် ကိုဖေါ်ပြနိုင်မယ့် (QR Code) များထားရှိပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ကစလို့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လိုင်းကား အသုံးပြုသူများဟာ ကားအတက်-အဆင်း တိုင်းမှာ ထားရှိပေးထားတဲ့ (QR Code) ကို Scan ဖတ်ပြီး Check in – Check out လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : Facebook : BMTA , Thairath
Previous Article ထိုင်းနိုင်ငံမှနေရပ်ပြန်သွားကြတဲ့ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားတွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိလား ?
Next Article ၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၁၅-၂၁ ရက်ထိ